आमा ! जसले छोरालाई मृगौला दिईन्(VIDEO) | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार आमा ! जसले छोरालाई मृगौला दिईन्(VIDEO)
आमा ! जसले छोरालाई मृगौला दिईन्(VIDEO)
२०७६, १ भाद्र आईतवार १९:१३
जसरी धर्तीले मानव जातिका लागि बोझ थामेकी हुन्छिन् । सन्तानका लागि आमाले त्यतिकै कष्ट उठाउँछिन् । नौ महिनासम्म अनेक दुखः कष्टलाई थिचोल्दै आफ्नो कोखमा राखेर सन्तानलाई जन्म दिन्छिन् । धर्यवान् र सहनशील भएर गर्भावस्थानको अप्ठ्यारोमा आफ्नो सन्तानलाई यो धर्तीमा पाईला टेकाउँछिन् ।
दुई अक्षरले निर्मित प्रिय शब्द आमाको सन्तानप्रतिको जिम्मेबारी अनगिन्ती छ । आमाको सन्तानप्रतिको मायाँको एउटा उदाहरण बनेकी छन्मालिका गाउँपालिका–३ रुमकी चन्द्रकुमारी पटेल । आफ्नो कोखबाट जन्मदिएका मनबहादुर पटेलको दुवै मृगौलाले काम नगरेपछि लामो स्वास्थ्य परिक्षणसँगै आफ्नो मृगौला दिएर छोरालाई नयाँ जीवन दिएकी छन् ।
१ छोरी र दुई छोराकी धनी चन्द्रकुमारीले छोरालाई आफ्नो एउटा मृगौला सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरेकी छन् । गरिबीकै कारण छोराको उपचारमा आर्थिक अभावमा सहयोग समेत संकलन गरी चन्द्रकुमारी छोराको नियमित उपचारमा समेत संलग्न भईन् ।उनले आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने अभियानमा समेत सक्रिय भएकी थिईन्।‘छोराछोरीलाई पीडा पर्दा आमाबुबाको मुटु नै छियाछिया हुन्छ,‘छोरालाई नयाँ जीवन दिन सफल भएको छु,‘छोरा स्वस्थ्य भए मैले त्यसैलाई ठूलो सफलता मान्छु’ पटेलले भनिन् ।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेको दिन दोस्रो जन्म हुने र आफुँ बाँचुन्जेल काखमै राखेर हुर्काउने बताईन् । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मृगौला म्याच भएपछि घर फर्किएकी पटेलको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । यसैबीच म्याग्दीको परोपकारी संस्था ओमकुमारी शान्ति कोषले पटेलको उपचारमा कार्यसमितिबाट सहयोग संकलन सहित कोषबाट गरी ५० हजार सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ।
कोषका सदस्य डक रोकाले सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए । सहयोग हस्तान्तरण गर्दै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका रोकाले छोरा कुपुत्र भए पनि आमा कहिल्यै कुआमा हुँदिनन् भन्दै शास्त्रमा बाबुभन्दा आमा दशगुणा बढी मान्यता दिएको बताए । गरिबीकै कारण मजदुरी र सामान्य खेतीपातिमा सक्रिय पटेल परिवारले घरको आर्थिक रित्तिएपछि कोषले केही सहयोग जुटाएको थियो । कोषका अध्यक्ष राजेश शाक्यले प्रत्यारोपणपछि पटेललाई बेनीमा स्वागत गरिने बताए ।
Previous articleपाकिस्तानी सेनाको गोली प्रहारबाट एक गोर्खा सैनिकको मृत्यु
Next articleम्याग्दीमा १० हेक्टर धान रोप्ने जमिन बाँझै,किसानहरु भटमास र मकै रौप्दै